ilo Wareed Mas'uul Ah: Wax Duqeymo Ah Kama Dhicin Duleedka Balcad Ee Gobolka Sh/dhexe.
Wednesday October 03, 2018 - 13:11:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
24kii saacadood ee aan soo dhaaftay Idaacado iyo Telefeshinno fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa baahinayay warar ay ku sheegayaan in diyaarado dagaal ay duqeymo ka geysteen deegaanno katirsan gobollada dalka.
Meelaha la sheegay in duqeymuhu ka dhaceen waxaa kamid ah duleedka deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya iyo deegaanka Basra ee duleedka degmada Balcad ee Shabeellaha dhexe.
Markii ay wararkaasi soo baxeen ayay shabakadda SomaliMeMo khadka taleefanka kula xiriirtay mas'uuliyiinta wilaayaatka islaamiga Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe waxayna noo xaqiijiyeen in wax duqeyn xagga ah cirka ah aysan ka dhicin labada gobol.
Sidoo kale xiriiro kala duwan oo aan la sameynay dadka deegaanka ayaan ku ogaanay in wax duqeyn ah aysan xalay ka dhicin deegaannada dhanka galbeed uga beegan magaalada Balcad ee Sh/dhexe.
"Majiraan wax duqeymo ah oo diyaaradaha cadowga ay ka geysteen deegaannada wilaayada Islaamiga sh/dhexe ee Mujaahidiintu maamulaan wararka aan ka maqlaynno warbaahinta waa been aan sal iyo raad laheyn"sidaas waxaa yiri sarkaal Al Shabaab katirsan oo SomaliMeMo lahadlay.
Maalin walba ayay warbaahinno ku hadla Afka Soomaaliga waxay warar aan jirin oo ku saabsan duqeymmo waxay ka sheegaan wilaayaatka islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxayna sheegidda duqeyn xagga cirka ah noqotay mid iska caadi ah marka loo eego wararka aan laga fiiran ee wariyaasha qaar qalabka warbaahinta ka tabinayaan.
Wararkan ishaacaadka ah ee warbaahinta qaar ay faafinayaan ayaa imaanaya xilli maalin ka hor howlgal burcad sifayn ah ay ciidamada xisbada wilaayada Shabeellaha dhexe ay ka fuliyeen tuulooyin dhanka xeebta ku teedsan oo hoos yimaad degmada Cadale halkaas oo lagu dilay Maleeshiyaad Burcad ah.
Al Shabaab Oo Askar Kenyaan ah kusoo qafaalatay Weerar ka dhacay Gobolka Wajeer.
Taliyihii Booliska Gobolka Hiiraan oo ku dhintay dagaal ka dhacay duleedka Beled Weyne.
Waare Oo xilka qaadis degdeg ah ku sameeyay Yuusuf Dabageed Guddoomiyihii gobolka Hiiraan,
20 Askari Kenyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku Noqday Weerar Ka Dhacay Duleedka Mandheera.
Qarax gaari looga gubay ciidanka Kenya oo ka dhacay Gobolka NFD.
Gaari Gaashaaman Oo Ciidamada AMISOM looga gubay Isgoyska Ex.Control Balcad.